Yintoni oyithandayo kakhulu phakathi E-isithuthuthu, isithuthuthu smart kunye E-Rubber? - Jomo Technology Co., Ltd
Yintoni oyithandayo kakhulu phakathi E-isithuthuthu, isithuthuthu smart kunye E-Rubber?
Inkangeleko , ukubonakala zazo ezahlukeneyo, kodwa kuzo thembela eseleyo abantu ukuba kufikelelwe, ngemfuneko ubuchule ukulinganisela inkqubo yokufunda ethile, akukho namnye uya kuba kuhle xa ekhwele ezi ukusukela ukuba bazalwa.
Scooter zombane xa kuthelekiswa ne yokugqibela ezimbini, kulula ukufunda kunye nolawulo njengoko weel njengoko ekhuselekileyo ngakumbi, kuba kwinqanaba handle kunciphisa amathuba ingqubekile, ingakumbi lo mfundi, ngoxa bethembele bengasayi indlela.
Waziqhekeza , bonke babe umsebenzi waqhekeza, kodwa indlela elekhtrons yahlukile, waqhekeza scooter yombane yeyona waziqhekeza oomatshini, phezu ekhohlo lever luye iqhosha brake, unako kwakhona step ivili ngasemva kwakho, oko waqhekeza kwisixando sokwenziwa.
Le scooter Smart kunye Electric Rubberwaqhekeza 's kuxhomekeke kwimali umva, ngoxa inertia kwabantu kunye iinqwelo ziza kupheliswa kunye waqhekeza, akunamsebenzi nokuba yintoni isantya, iziqhoboshi ungalawuleka lula, ukuba waqhekeza esebenzayo.
Isantya , phantsi kweemeko eziqhelekileyo, isantya Rubber yombane olele, ukukwazi lisanyuka ilungile ngaphezu kwezinye ezimbini. Isantya oqhelekileyo yi-30km / h, isantya Ingaphezulu 40km / h, yiya ngokukhawuleza
Koowheel Electric scooter L8, isantya lingu- 25 Km / h ngexesha lekhefu mveliso (The ngesantya max zilungiswe kwi-30km / H thrugh APP isicwangciso ngomsebenzisi)
Isantya max of Smart balance scooter K5 yi 15km / H.
Oku kunokubonwa ukuba ngezithuthuthu zombane L8 kunye Rubber Electricke ngokukhawuleza ngaphezu scooter smart kwisantya. Sinako awuthwale ukuya naphi na. Rubber zombane kakhulu kakuhle, bubonakala ngakumbi ngexesha leeyure rush. Bonke bephela izixhobo ezilungileyo iihambo ezimfutshane.
Ngaphezu izixhobo short-uhambo nendlela kwaye imnandi, leyo olithanda kakhulu?